Govecs GO! T1.5 – 🛵 इलेक्ट्रिक स्कूटर 2021
GO! T1.5 अब उत्पादनमा छैन।
GOVECS GO! T1.5 नवीनतम लिथियम प्रविधिसँग उच्च प्रदर्शनको यातायात / वितरण स्कूटर हो। यो 50 वा 80cc स्कूटरको लागि प्रतिस्थापन हो। T1.5 स्कूटरहरू विशेष गरी व्यवसायमा प्रयोग गरी व्यापारिकहरु द्वारा प्रयोग गरी विकसित भएका छन् र 50 देखि 170 लिटर कार्गो बक्समा उपलब्ध छन्। स्कूटरसँग 180 किलो (चालकको बाहेक) का कार्गो वजन लिने क्षमता छ। 2017 को लागि नयाँ सुविधाहरू एक नयाँ राज्यको अत्याधुनिक BMZ ब्याट्री हुन् र ब्याट्रि व्यवस्थापन प्रणाली (बीएमएस) अपडेट गरियो।
जाओ! T1.5 सँग एक हटाउन योग्य ब्याट्री छ। ब्याट्रीमा 15 किलोको वजन छ र सजिलैसँग लक गर्न सकिने ब्याट्री डिब्बेबाट सजिलै लिन सकिन्छ। कुनै पनि चार्जर, कार्यालयमा, घर वा रेस्टुरेन्टमा कुनै पनि नियमित शक्ति आउटलेटमा चार्ज गर्न सम्भव छ। केवल 1 घण्टा पछि अक्टोमा 80% चार्ज पुग्छ र2घण्टा 100% पछि।
जब स्कूटर एक पर्खाल सुकेट नजिकै छ भने 600 वाट चार्जरमा निर्मित ब्याट्री चार्ज गर्न पनि सम्भव छ। ब्याट्रीमा चार्जरको साथ चार्ज गर्नको लागि ब्याट्री स्कूटरबाट हटाउन आवश्यक छैन।
Govecs ले ब्याटरीको दायरालाई 2016 को नवीनतम मोडेलहरूमा ग्यारेन्टी गर्दछ। ब्याटरले पहिलेको मोडेल जस्तै T1.4 भन्दा बढी 45% भन्दा बढि दायरा छ। नयाँ अडियोले निरन्तर प्रदर्शन प्रदान गर्दछ जबसम्म ब्याट्री खाली छ।
T1.5 उन्नत ब्रशलेस उच्च क्षमता बिजुली मोटर द्वारा संचालित छ र कम रखरखाव बेल्ट ड्राइव छ। बिजुली स्कूटरमा एक परिष्कृत ड्राइभ रेल छ जसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि स्कूटर लगभग कुनै शोर उत्पन्न गर्दैन। ड्याशबोर्डमा “अर्थव्यवस्था स्विच” प्रयोग गरेर तपाइँले ठूलो दायरा वा द्रुत गतिवर्णन बीच चयन गर्न सक्नुहुनेछ।
T1.5 को 63 किमी / घन्टा को अधिकतम गति संग T1.5 + संस्करण को रूप मा आर्डर गर्न सकिन्छ।